सङ्घीय संसद् अधिवेशन भोलिदेखि || समाचार
सङ्घीय संसद् अधिवेशन भोलिदेखि
काठमाडौं / सङ्घीय–संसद्को पाँचौँ अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै छ । अधिवेशनसँगै भावी सभामुख चयन र सदनको कामकारबाहीका विषयमा सचिवालयले तयारी थालेको छ ।
पहिलो बैठकको कार्यसूचीबारे सचिवालय गृहकार्यमा रहे पनि सभामुख चयनबारे राजनीतिक वृत्तमा औपचारिक रूपमा विषय प्रवेश पाएको छैन । शीर्ष तहमा अनौपचारिक रूपमा भने केही परामर्श भइरहेका छन् ।
तर, उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले औपचारिक रूपमा कुनै परामर्श नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “संविधान कार्यान्वयन मेरो पनि दायित्व हो । यसप्रति म सचेत छु । अहिलेसम्म राजीनामाको विषयमा औपचारिक रूपमा कुनै परामर्श भएको छैन । नयाँ सभामुख चयनको कार्यतालिका नआएसम्म राजीनामा हुँदैन । ”
राजीनामाबारे दलले पनि औपचारिक रूपमा कुनै पनि निर्णय निर्देशन नगरेको उहाँको भनाइ छ । सम्भवतः पुस पहिलो साताभित्र सभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक हुने छ । तर, संसद् सचिवालय र राजनीतिक दलबीच कुनै परामर्श भने भइसकेको छैन ।
अधिवेशनको दिन शुक्रबार बिहान नै राजनीतिक दलहरूसँग अनौपचारिक रूपमा विषय, कार्यतालिकालगायतमा परामर्श गर्ने तयारी उपसभामुखको छ । राजनीतिक दलसँगको परामर्शका आधारमा कार्यतालिकालगायतका विषयले टुङ्गो पाउने छन् । तर, नेकपाका एक नेताले भने यही पुस ६ गतेको बैठकबाट सभामुख चयनको कार्यतालिका सार्वजनिक हुने दाबी गर्नुभयो ।
सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै तुम्बाहाङ्फेले अधिवेशनको पहिलो बैठक सञ्चालन गर्नुहुने छ । संविधानको धारा ९१ (४) को व्यवस्थाअनुसार सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गर्नुहुने छ ।
सभामुख तथा उपसभामुख दुवै रिक्त रहेको अवस्थामा भने ज्येष्ठ सदस्यबाट बैठक सञ्चालन हुने छ । धारा ९१ (५) मा सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन नभएमा वा दुवै पद रिक्त भएमा ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । हाल सभामुखको पद रिक्त रहेको र उपसभामुख कायम रहेकाले अधिवेशनको पहिलो बैठक उपसभामुखबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो ।
के के हुन्छन् कर्यसूची ?
अधिवेशनको पहिलो दिन सामान्य कार्यसूची मात्र तय छ । सभामुख चयनको कार्यतालिकामा दलबीच राजनीतिक सहमति नभएमा पहिलो दिनको बैठक छोटो हुने छ । पहिलो दिन राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानका लागि प्रेषित पत्र वाचन हुने छ । यस्तै शहीदका नाममा मौनधारण र अधिवेशन नभएका अवधिमा निधन हुनुभएका पूर्वसदस्यहरूको शोक प्रस्ताव मात्र कार्यसूची रहने छन् । दलीय सहमति भएमा सभामुख चयनको कार्यतालिका सार्वजनिकका लागि निर्देशन हुने छ तर उक्त सम्भावना न्यून छ । गोरखापत्र